China cosmetic grade GSH l-Glutathione / lglutathione Powder Yakadzora fekitori uye vagadziri | Guanlang
Yekushambadzira giredhi GSH l-Glutathione / lglutathione Powder Yakadzoserwa yeganda kuchenesa glutathione poda
Chigadzirwa Chigadzirwa: L-glutathione Yakaderedzwa
CAS Nha.: 70-18-8
Mamwe Mazita: l-glutathione
EINECS Nha. 2: 00-725-4
Glutathione (GSH) inonzi Kuderedzwa glutathionekana L-GlutathioneReduced, yakakosha antioxidant muzvirimwa, mhuka, fungi, uye mamwe mabhakitiriya uye archaea, chena crystalline upfu. Iyo atripeptide ine gamma peptide linkage pakati peboka re carboxyl yebuttutate side cheni uye amine boka re cysteine, uye iro carboxyl boka re cysteine ​​rinosungirirwa neyakajairika peptide kubatanidza kune glycine.Thiol mapoka ari kudzora vamiririri, aripo pakufungidzira. dzakakomberedza 5 mM mumaseru emhuka. Glutathione inoderedza disulfide zvisungo zvakaumbwa mukati me cytoplasmicproteins kune cysteines nekushanda seyemupi mupi. Mukuita,glutathione inoshandurwa kuita fomu yayo yakasanganiswa, glutathione disulfide (GSSG), inonzi zvakare L-glutathione.
Chitarisiko White crystalline upfu
Arsenic P 2ppm
Heavy simbi -10ppm
Kurasikirwa pakuomesa (3h pa105 ℃) ≤0.5%
Zvakasara paIgnition ≤0.1%
L-glutathione yakasanganiswa .51.5%
Yese tsvina .02.0%
Munhu akaidza (yakaoma hwaro) 98.0% kusvika 101.0%
1.Dzivirira chiropa uye ubate zvirwere zvine chekuita nechiropa.
2.Tora mamota uye uderedze mhedzisiro yemakemikari uye radiotherapy.
3.Glutathione semushonga, inogona kusanganiswa nemakemikari ane chepfu, simbi inorema ions kana zvinhu zvine carcinogenic kusimudzira kubuda kwavo. Inogona kushandiswa pakurapa detoxification yeacrylonitrile, fluoride, carbon monoxide, simbi dzinorema uye mamwe manyowa anonyungudutsa.
4.Tora maziso ophthalmic, kunyanya cataract.
5.Glutathione inogona kugadzirisa kusaenzana kweacetylcholine uye cholinesterase. Inotamba inorwisa-segiji chikamu.
6. Zvidzidzo zvenguva pfupi zvakaratidza kuti glutathione inogona zvakare kuve nemhedzisiro yekudzivirira hutachiona hweAIDS.
Kudya uye kunyorera:
1.Glutathione yakaenzana ne vitamini C, inogona kuwedzerwa yogati uye chikafu chevana uye kutamba chinodzikamisa basa;
2.Sezvo glutathione inogona kudzivirira pigmentation, inogona kuwedzerwa kune michero yemagaba kudzivirira browning;
3.Nekuda kwekudzikiswa kweGlutathione, inogona kuwedzerwa kune zvigadzirwa zveupfu kuti zviitwe basa rekudzora uye nekusimbisa amino acid;
4.Kuwedzera Glutathione kuchingwa kunogona kupfupisa nguva yekusanganisa mukugadzirwa kwekugadzira
5.Glutathione ine nyama yakasimba inonaka kana yakasanganiswa neL-glutamate, nucleic acid inonhuhwirira zvinhu kana musanganiswa wayo.
Glutathione inogona kudzvinyirira nucleic acid uye inowedzera kunaka mukeke yehove.
6.Glutathione inogona kuwedzera kunaka munyama, chizi uye zvimwe zvigadzirwa zvekudya.
7.Mhando dzakasiyana dzechikafu chinoshanda uye chikafu chehutano chakagadzirirwa ne glutathione sechinhu chinoshanda chinoshanda.
Zvizoro uye maficha:
1.Glutathione inogona kunatsa cytotoxic zvinhu. Iko kushandiswa mune zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda kunogona kurapa uye kubvisa zvakapetwa zvinorema simbi muganda uye chepfu muguruva.
2.Glutathione inorwisa-kukwegura antioxidant. Iyo inogona kubvisa mahara radicals mumuviri uye kuchengetedza zviitiko zvehupenyu zveprotein nema enzymes. Iyo ndiyo yemahara yemahara inotsvaira mumuviri, kuitira kuti iyo yemahara yakaipa yekutsvaira maitiro inogona kuenderera.
3.Glutathione ine yakanakisa kuchena maitiro ne transdermal yekumwa. Iyo inodzivisa kugadzirwa kwemahara radicals uye
peroxides kubva kune melanin yekudzora biochemical zviitiko zvemelanocytes uye kutapudza zvine chepfu zvinhu kubva ku pigment cell.
Iyo pakupedzisira inodzivirira pigment maseru kubva necrosis uye metamorphism.
Pashure: Trending Zvigadzirwa China Yakakwira Hunhu Kurema Kwekurasikirwa Powder 99% Orlistat CAS 96829-58-2
Trending Zvigadzirwa China Yakakwira Hunhu Kurema Los ...